प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिप्रति नेम्वाङ्गको आपत्ति: जे पनि हुन्छ भनिदिने ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिप्रति नेम्वाङ्गको आपत्ति: जे पनि हुन्छ भनिदिने ?
काठमाडाै, ३० पुस । काठमाडौ पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमति रहेकाे बताएका छन ।
शनिवार देउवाका पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमति राख्दै जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्न देउवा सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘यो नेपाल हो जे पनि हुन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्यता राख्दै नेम्वाङ्गले भने–‘प्रधानमन्त्रीजी मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएर पदमा बस्न मिल्दैन । झण्डै २ तिहाई ल्याएको गठबन्धनलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस् र सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् ।’
‘सरकारलाई ढिलो गर्नु छ । त्यही भएर प्रदेश राजधानी र प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन’, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली उपचारमा बैंकक जानु अघि पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई ती काम गर्न आग्रह गरेपनि सरकारले वेवास्ता गरेको जनाउदै भने–‘एउटा उखान छ । हिजो पारि वनमा चितुवा कराउनु, आज खोरको सिंगौरी खसी हराउनु भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएन । सरकार लम्ब्यानका लागि यो सब नाटक किन ?
नयाँ संविधानको प्रस्तावनाले कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन हुने तर समयमा मतपरिणाम नआउने हो भने संविधानको आत्म मर्छ । सरकार किन यस्तो खेलमा लागेको छ ? नेम्वाङ्गको प्रश्न थियो ।
डाक्टर केसीका माग गलत : सांसद बस्नेत